काका र फुचुंग्री (भाग–१९) -::नेपाली एकता – विश्वभरिका श्रमजीवीहरुको आफ्नै आवाज
फुचुंग्री :- हिजो आज काठमाडौंमा निकै चिसो जाडो छ भन्छन्, हिजो त पानी पनि परेछ हैं काका ?
काका :- प्रचण्डले नौलो जनवादी क्रान्ति सफल भइसक्यो भने पछि चिसो जाडो बढ्यो झन चुनावबाट समाजवादमा जाने भने पछि पानी दर्कियो ।
फुचुंग्री :- कार्यकर्तालाई थाहाँ छैन र यो अवसरवाद हो भन्ने ?
काका :- दश रुपैयाँको फूलको मालामा आफ्नो जीवन बेच्ने नालायक मुर्खहरुलाई केही फरक पर्दैन । यि मालामिका भारी धरतीका बोझ हुन् । शक्तिका पुजारी गद्दार मान्छेलाई नीति सिद्धान्त विचारसँग कुनै मतलब हुँदैन ।
फुचुंग्री :- एउटा साथीले घरमा वाईफाई सेवा छ, यता तिर फुट परस्त तत्वहरूलाई घुस्न दिएका छैनौं भन्थ्यो हिजो त आफै सुइँकिएछ नी दश रुपैयाँको फूलको माला लगाउन ।
काका :- मैंले पनि कुरा गरें, आधा जीवन गरेको संघर्षलाई त्यो जाबो दश रुपैयाँको फूलको मालामा किन खेर फाल्यौ । बरु बिग्रिनु बिग्रिनु राप्रपा काँग्रेस थियो नि । विचराको राजनैतिक चेतनास्तर देखेर टिठ लाग्यो । वाईफाई सेवाले गर्नु गर्या उसलाई।
फुचुंग्री :- जागरण क्लबका मान्छेहरूको नेकपा मसाल केन्द्रीय संगठन समिति गठन गरेको एक दुई महिना मैं सबै तितर वितर भइसके त।
काका :- पुरोहितले दानमा बटुलेका गाई दाम्लो छिनालेर तितरवितर हुँदैछन्, नेकपा (मसाल) ले पार्टीबाट निष्काशित गरिएका, कार्यबाहीमा परेका वा निष्क्रिय बसेका इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई आत्मालोचना गरेर आफ्नो मूल घरमा वापस आउन अपिल गरेको छ।
फुचुंग्री :- मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आगामी आठौँ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलन को के तयारी छ काका ?
फुचुंग्री :- मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आगामी २०२२ फरवरी २७–२८ र १ मार्चमा हुन गइरहेको आठौ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलन सफल पार्न १२ डिसेम्बर २०२१ को केन्द्रीय विस्तारित बैठक भोपालले ‘गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार एबं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरौं ।’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । त्यही अनुरुप भारत व्यापी रूपमा क्षेत्रीय स्तर नगरस्तर एरिया समिति टोल समितिमा प्रचारात्मक भेला भएका छन् । प्रतिनिधि पर्यवेक्षक आमन्त्रित दर्शकको छनौटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सम्मेलन सफल पार्न विभिन्न क्षेत्रबाट व्यवसायी विभाग पहिलो पटक आर्थिक नैतिक भौतिक तवरले फिल्डमा उत्रिएको छ ।
फुचुंग्री :- कतिपय ठाउँमा कतिपय अवस्थामा निष्क्रिय बसेका साथीहरु पनि यतिबेला समाज चाहिन्छ । हामी नभए पनि समाज रोकिँदैन भन्ने कुरा बुझे छन हैं काका ?
काका :- हो यतिबेला आठौं अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलन सफल पार्न सबै साथीहरू हातेमालो गर्दै जुट्नु भएको छ, यो खुशीको कुरा हो । विभिन्न स्तरका भेला एरिया सम्मेलनमा उहाँहरुको राम्रो सक्रियता देखेर म पनि दंगै परे ।
फुचुंग्री :- गोरखपुर भेला गरेका कथित जागरण क्लबका समर्थकहरु त कुहिरोमा काग हराए झैँ हराए हैं काका ?